Sheekooyinkii Ugu Wanaagsanaa | buug.ga
10/07/2018 Cabdirisaaq Maxamed Cilmi “ina Warfaa”Sheekooyinkii Ugu Wanaagsanaamaamul
Kani waa sheekooyinkii ugu wanaagsanaa ulajeedadaydu waxay tahay in aan ugu dhawaado Eebbe, aniga oo ugu qoraayo afka Soomaaliga sheekooyin Islaami ah, dadka jecel rabana iney u sii gudbiyaan caruurtooda.
Jimce, 16.12.1427 Hijri oo ku aaddan 5.1.2007 Miilaadi
Nebi Saalax wuxuu Eebbe u soo direy reer Samuud. Waxay ahaayeen dad abaaldaran, maxaa yeelay Eebbaa wuxuu siiyey xoolo fara badan, hase ahaatee Barbaariyahooda ma aysan rumeyn ee waxay caabudi jireen sanamyada ay kadhaxleen aabayaalkoodii. Reer Samuud waxay isugu faani jireen awoodooda. Dabadeed baa Eebbe u soo direy nebi Saalax inuu ugu bishaareeyo jano hadday rumeeyaan, ugana digo naar hadday rumeyn waayaan, hase ahaatee wey beeniyeen. Waxayna ka codsadeen inuu ula yimaado calaamad ay ku gartaan inuu nebi yahay si ay u rumeeyaan, wuxuuna ula yimid nebi Saalax hal.
Wuxuuna faray reer Samuud ineysan dhibin, hase ahaatee waxay ku adkeysteen islaweynidoodii oo dabadeed waxay dileen hashii.
Nebi Ibraahin wuxuu ahaa saaxiibkii Eebbe, waana mid ka mida shanta rusul ee ugu wanaagsan Eebbe agtiisa, wuxuuna ka dhigey rasuul, wuxuuna ka doortey uun badan oo Eebbe abuuray. Nebi Ibraahin waxaa loo soo direy dad caabuda xidigaha oo uu la noolaa, wuxuuna dadkiisii ugu yeeri jirey iney Eebbe keligiis caabudaan, hase ahaatee wey beeniyeen. Waxayna isku dayeen iney gubaan,
Eebbe ayaana ka badbaadiyey. Eebbana wuxuu wiilashiisii Ismaaciil iyo Isxaaq ka yeelay nebiyo.
Nebi Dul-Kifli nabadgelyo korkiisa ha ahaatee
Markaas baa labadii Rasuul tuuladii rumeyn weysey. Kolkaas buu Eebbe u soo direy Rasuul saddaxaad tuuladii. Kor ahaaye Eebbe wuxuu Qur’aankiisa noogu sheegay inuu rumeeyay nin, dadkiisiina ugu yeeray iney rumeeyaan rusushaas,
Nebi Saleebaan Eebbaa wuxuu siiyey aqoon iyo xikmad. Wuxuuna baray hadalka shimbiraha iyo xoolaha kale, wuxuuna u fududeeyay dabeysha iyo Jinka. Nebi Saleebaan wuxuu soo booqan jirey ciidankiisii mararka qarkood. Markaas buu wuxuu waayey shimbirkii Hudhudka ahaa maalin maalmaha ka mid ah, dabadeed baa waxaa yimid Hud-hudkii markuu maqnaa in muddo ah. Wuxuuna ku yiri nebi Saleebaan waxaan ka imid Saba’, waxaana kaaga sidaa war run ah oo waxaan ku soo arkey goobtaasi naag boqorad ah oo la siiyey wax walba, waxayna caabudayeen iyada iyo dadkeedaba qoraxda. Markaas ka dib buu nebi Saleebaan wuxuu qorey warqad, wuxuuna faray Hudhudkii inuu u geeyo warqaddaasi boqoraddii Saba’. Hudhudkiina wuxuu u geeyay warqaddii Balqiisa, markii ay heshay warqaddii nebi Saleebaan uu ku lahaa ha isla key weynaanina ee ii imaada idinkoo muslimiin ah. Kolkaas ayey Balqiisa iyo madaxdeedii waaweynaa u tageen Nebi Saleebaan. Ka dib markii Balqiisa ay aragtey wuxuu Eebbe siiyey nebi Saleebaan ayey Muslintey iyada iyo dadkeediiba, nebi Saleebaan ayaana guursadey Balqiisa.
Aasiyo – Eebbe ha ka raali noqdee – Boqoraddii mu’minadda ahayd…
Sidaas ayuuna Eebbe ku badbaadiyey nebi Muuse oo uu ku noolaado gurigii Fircoon, Eebbe kor ahaaye wuxuu yiri: (Oo waxaan u waxyoonnay Hooyadii ”nebi” Muuse iney nuujiso oo haddaad u cabsato ku rid badda oo ha ka cabsan oo ha murugoon waannu kuu soo celin oo waxaannu ka yeeli mid ka mid ah rususha. Oo waxaa soo qaatay reer Fircoon si uu ugu noqdo col iyo murug runtii Fircoon iyo Haamaan iyo labadooda ciidan waxay ahaayeen dembiilayaal. Waxay tiri xaaskii Fircoon ”Aasiyo” waa inoo indho qabowsi aniga iyo adiga ha dilin waxaa laga yaabaa inuu wax na taree ama aan ka dhigano ilmo. (iyagoon dareemeyn). al-Qasas 7-9.
Maalin maalmaha ka mid ah ayey ka kacday hurdadeedii goor aroor hore ah iyadoo isu diyaarineyso iney aadaan macbadka qoraxda iyada iyo dadkeedii reer Saba’ si ay u soo caabudaan qoraxda. Isla xiligaas waxaa noolaa nebi Saleebaan n.k., isaga iyo ciidankiisana waxay caabudi jireen Eebbe. Eebbana wuxuu siiyey nebi Saleebaan boqortooyo weyn. Wuxuuna sameystay nebi Saleebaan ciidan weyn oo ka kooban dadka, jinka iyo shimbiraha. Nebi Saleebaan wuxuu soo booqan jirey ciidankiisii mararka qarkood.
← Qeexid Kooban oo Kusaabsan Islaamka	Sifeynta Islaamka →